Lelee egwuregwu anyị niile - Gamepron
Choputa Egwuregwu Egwuregwu Anyị
Nweta # 1 Games hacks n'ịntanetị site na ịzụta igodo ngwaahịa sitere GamePron! Ndị ọrụ anyị anaghị enwe atụmatụ ndị achọrọ iji merie.
Chee maka oge ndị ahụ niile ị ga-edetu mmeri, naanị iji nwechaa obi ilu. Enwere ọtụtụ ndị egwuregwu gburugburu ụwa bụ ndị na-adabere na ndị otu ha ka ha buru ha na egwuregwu, ndị ahụ bụ ndị ị ga - achọ iji ike na - ezere - mgbe ị hụrụ ha na otu gị, ọ bụrụ na ị nwere ohere ịhapụ, mee ya! Ọzọkwa, ị nwere ike ịkwado naanị nhọrọ nhọrọ ịtụnanya dị na Gamepron ma gosi ndị otu gị otu esi eme ihe. Ọ baghị uru egwuregwu ị masịrị, ebe Gamepron nwere ike inye hacks maka ọtụtụ egwuregwu dị iche iche. Ngosipụta na ịdị mma bụ ahịrịokwu abụọ ị ga-anụ obere oge mgbe ị na-ekwu maka Gamepron, nke ahụ bụ n'ihi nkwado dị ukwuu anyị hụrụ site n'aka ndị ọrụ anyị.
Ndị na-agba chaa chaa n'ụwa niile na-arịa ọrịa na ike gwụrụ ịdabere na nhọrọ mbanye anataghị ikike iji megwara ha. Ma ị bụ onye ọkpụkpọ ohuru nke chọrọ ịnwe mmeri ma ọ bụ ụdị onye agha na-eriju afọ, iji hacks (na aghụghọ!) Dị na Gamepron ga-etinye gị n'ọnọdụ ọganiihu. Ga-enwe ọtụtụ ndị na-egbu, obere ọnwụ na naanị ihe ịga nke ọma n'ozuzu!
Njirimara ndị dị ugbu a n'ime aghụghọ anyị nwere ike ịbụ ihe ịtụnanya ịtụle iji, ọkachasị mgbe nhọrọ ndị ọtụtụ mmadụ na-ahụbeghị n'oge gara aga (dị ka ọnọdụ Super Jump ma ọ bụ akara ukwu ukwu na atụmatụ mmebi dị elu), nke mere ka anyị bụrụ ọrụ pụrụ iche ịzụta ihe niile nke hacks si. Anyị nwere ike ịkwado ogo ngwaọrụ anyị, ma anyị na-eme ya na-akwụghị ndị ahịa anyị ego na-adịghị mma. Dị njikere ime mgbanwe na-alụ ọgụ ka onye iro gị? Nwere ike iji obi ike na-egwu egwuregwu gị mgbe ịnwere hacks & aghụghọ dị na Gamepron nyeere!
PUBG LITE Mbanye anataghị ikike
Onu ire Akụkọ Ifo Hacks
COD Vanguard mbanye anataghị ikike